Nyaya dzaDaniel Salikov pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Daniel Salikov
Daniel Salikov ndiye Marketing Director pa Rocket kufamba, sangano rekugadzira rinotarisa pakugadzira anotsanangura uye mavhidhiyo ekutengesa ekutanga-ups.
5 Mazano Ekuwedzera Yako Vhidhiyo Yekushambadza Shanduko Mateti
Chipiri, Mbudzi 30, 2021 Chipiri, Mbudzi 30, 2021 Daniel Salikov
Ingave yekutanga kana yepakati bhizinesi, vese vemabhizinesi vanotarisira kushandisa nzira dzekushambadzira dzedhijitari kuti vawedzere kutengesa kwavo. Digital marketing inosanganisira search engine optimization, social media marketing, email marketing, etc. Kuwana vangangove vatengi uye kuva nepamusoro-soro kushanya kwevatengi pazuva kunoenderana nekuti unoshambadzira sei zvigadzirwa zvako uye kuti zviri kushambadzwa sei. Kushambadzirwa kwezvigadzirwa zvako kuri muchikamu chesocial media kushambadzira. Unoita mabasa akasiyana akadai